५० लाख पारिश्रमिक सोच्न नसक्ने झरना, साम्राज्ञीको कति ? « Ramailo छ
५० लाख पारिश्रमिक सोच्न नसक्ने झरना, साम्राज्ञीको कति ?
केही दिन यता नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कलाकारले लिएको पारिश्रमिकको चर्चा छ । झरना थापाको आगामी फिल्ममा युवा स्टार अनमोल केसीलाई गरिएको पचास लाखको अफर गरेको खबर भाइरल बन्यो । यता नायक आर्यन सिग्देलले बनाउने कायरा बाट नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले लिएको दश लाख पारिश्रमिक पनि चर्चा को विषय बन्यो । यस विषयमा के भन्छन् त झरना र साम्राज्ञी ? यो भिडियो हेर्नुस् :
झरनाले अनमोललाई पचास लाखको अफर नगरेको बताएकी छिन् । बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलमा झरनाले भनिन्, पचास लाख सोच भन्दा परको कुरा हो । फिल्मको लगानीको आधा म अनमोललाई दिन सक्दिंन । साम्राज्ञी भने नायक सिग्देलले बनाउने फिल्मबाट लिएको पारिश्रमिक बारे चुप छिन् । पारिश्रमिक बारे सोध्दा साम्राज्ञी भन्छिन्, ‘आर्यन दाईले केही भन्नु भएको छैन भने मैंले पनि भन्न मिल्दैन् । मेरो पारिश्रमिक कति हो कहिल्यै पनि खुलासा गरेको छैन।’